Apple ayaa ka dhammaatay kaydkii taxanaha Apple Watch Series 6 titanium | Wararka IPhone
Apple wuxuu ka dhammaaday kaydkii Apple Watch Series 6 titanium
Taxanaha Apple Watch ee hadda jira oo leh sanduuqa titanium -ka ayaa aad u yar. Waxay u muuqataa in gudaha Mareykanka iyo inta kale ee suuqyada waaweynba, ay adag tahay in la helo moodel la heli karo Apple Edition, taas oo ah in la yiraahdo, taxanaha 6 ee titaniumku wuu dhammaaday.
Iyadoo lagu xisaabtamayo inay jirto bil iyo wax yar oo ka Keynote September ee Apple, Waxaa suurtogal ah in taxanaha cusub ee 7 -da la bilaabi doono sanadkan, waana sababta keentay in kaydku ka dhammaado.
Mark Gurman ayaa ku daabacay balooggiisa Bloomberg in aan hadda la heli karin daabacaadda Apple Watch (midka leh sanduuqa titanium) ee Maraykanka iyo suuqyada waaweyn ee shirkadda.
Apple wax war ah kama soo saarin arrintan, mana aha in tusaalaha la joojiyay ama ay jiraan dhibaatooyin xagga sahayda ah. Waxay u badan tahay in sababtu ay tahay soo bixitaankii ugu dhawaa Apple Watch Taxanaha 7, oo loo qorsheeyey bisha Sebtember qodobka ugu muhiimsan ee ay shirkaddu u dabbaaldegi doonto inay soo bandhigto iPhones -ka cusub sannadkan.
Aragtida uu Mark Gurman ku sharraxayo balooggiisa ayaa ah inay tahay a qaab aad u qaali ah, iyo in iibkii yaraa awgii, shirkaddu ma aysan doonayn inay soo saarto unugyo badan, waxayna ka dhammaatay kaydkii.
Laakiin wax yar baan sii socdaa. Waa maxay sababta aysan Apple u samayn cutubyo badan markay aragtay inay ka sii dhammaan doonto kaydkii? Sababtoo ah waxaa suurtogal ah in sidii dhacday sanadkii la soo dhaafay Apple Watch Series 5, taxanaha cusub ee 7 wuxuu bixiyaa war aad u yar marka la barbar dhigo Taxanaha 6 ee hadda jira, in shirkaddu go'aansato dib u soo celi taxanaha Apple Watch 6 marka ay soo saarto Taxanaha 7, waana sababta aysan u go'aansan inay dib u soo saarto taxane ay qorsheyneyso inay ka fariisato bil gudaheed.
Sidaa darteed waxaan sugi doonaa dhacdada Apple ee soo socota, mabda 'ahaan Sebtember (iyada oo aan weli la xaqiijin), waxaanan ka tagi doonaa shaki haddii shakigaygu run yahay iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple wuxuu ka dhammaaday kaydkii Apple Watch Series 6 titanium
Kobcinta koontaroolada waalidka ee macruufka iyo iPadOS marka la sii daayo Waqtiga Isticmaalka API
Instagram -ka loogu talagalay carruurta ka yar 13 sano ayaa dhowaan noqon doonta mid dhab ah